बलात्कार मुद्दामा पिडितलाई पनि सजाय ! – Butwal 24 News
बलात्कार मुद्दामा पिडितलाई पनि सजाय !
September 25, 2021 September 25, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on बलात्कार मुद्दामा पिडितलाई पनि सजाय !
दैलेख : जिल्ला अदालत दैलेखले बलात्कार मुद्दामा दुवै पक्षलाई सजाय सुनाएको छ । अदालतले बिहीबार पीडकलाई १० वर्ष कैद र पीडकलाई उन्मुक्ति दिन वयान फेर्ने पिडित पक्षलाई समेत पाँच हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरी विपरित वयान फेरेपछि अदालतले पिडित पक्षलार्ई समेत सजायको फैसला गरेको हो । बलात्कारमा दोषी ठहरिएका दुल्लु नगरपालिका–८ का ६१ वर्षीय नन्दाराम भण्डारी र बयान फेर्ने बलात्कृत बालिकाकी आमालाइ जरिवाना गरेको हो ।
अदालतले १७ वर्षीया बालिकालाई झारफुक गर्ने बहानामा बलात्कार गरेको कसूरमा पीडक भण्डारीलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । आरोपित भण्डारी जोगाउन बलात्कार भएको होइन भनी वकपत्र गरेकी पीडित बालिकाकी आमालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको अदालतका सुचना अधिकारी टीकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उजुरी गर्दा ५ हप्ताको गर्भ रहेको बताएको र कानून अनुसार अस्पतालमा गर्भपतन गराएको प्रमाण छदाँछँदै आरोपित पक्षलाई जोगाउन उजुरीमा उल्लेखित ब्यहोरा विपरित वकपत्र गर्ने पीडित पक्षलाई समेत सजाय भएको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि घिमिरेले बताए ।
२०७७ वैशाख १० गते झारफुक गर्ने बहानामा आफ्नै घरमा बोलाएर भण्डारीले बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । घटना लगत्तै पीडित पक्षले २०७७ जेठ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । प्रहरीले भण्डारीलाई सोही दिन पक्राउ गरेको थियो । अदालतले थुनछेक वहसपछि भण्डारीलाई पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागारमा थुनामा पठाएको थियो ।
राज्यको साधन श्रोत र जनशक्तिको खर्च गराएर कानूनी प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरुमा प्रलोभन, डर, धाक र दवावमा मुद्दा होस्टाइल गराउने खराब प्रचलन बसेको डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताए । यस्तो अवस्थामा मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय हुनुले यस्ता बिकृति रोकथाममा सहयोग पुग्ने डीएसपी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
इन्टरनेट कम्पनीलाई कुलमानले दिए यस्तो कडा चेतावनी, इन्टरनेट कम्पनी त’ना’वमा,
दुवै डाे’ज खाेप लगाएकी नेपालकी पौडीबाज गौरिकालाई को’रोना संक्रमण
August 27, 2021 Butwal 24 News
युट्युबमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने चार युट्युबर पक्राउ, प्रहरीले सबै युट्युबर लाइ दियो यस्तो चेतावनी
September 29, 2021 September 29, 2021 Butwal 24 News
आर्कषक तलवका साथ यूएईले माग्यो २०० नेपाली कामदार, कति छ तलव ?
दुई छोरी दुर्घटनामा परेको खबर पाएलगत्तै बुवाआम काठमाडाैंबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुगे तर